Utah ကျောင်းသားများသည်စစ်မှန်သောလိင် ed နှင့်မူးယစ်ဆေးအသစ် (10-9-16) ကိုတွန်းလှန်ရန်လိုအပ်သည် - Brain On Porn
utah ကျောင်းသားများကိုအစစ်အမှန်လိင် ed လိုအပ်ချက်များနှင့်သစ်မူးယစ်ဆေး (10-9-16) Fight
Clay Olsen၊ Gary Wilson၊ Jill Manning၊ Candice Christiansen နှင့် Donald Hilton တို့ဖြစ်သည်
သူတို့တစ်ဦးတိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီး navigate အဖြစ်လူငယ် supporting ၏အရေးပါမှုကိုလုံးဝနီးပါးလူတိုင်းအပေါ်သို့သဘောတူနိုင်သည်တစ်ခုခုပါပဲ။ အကောင်းဆုံးနေအိမ်များ, ကျောင်းများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း-နှင့်အတူအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော complementary ချဉ်းကပ်မှု၌ဤပြီးမြောက်ဖို့ကိုဘယ်လိုရှုထောင့်ရှိအခြို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကွဲပြားခြားနားမှုပါဝင်မှခညျြနှောငျစကားပြောရရှိနိုင်-ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးအတွက် Op-Ed နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေ, စာရေးသူကျွန်တော်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအဘယ်သူသည်သိသာထင်ရှားသောနည်းလမ်းအတုတစ်ခုထုံးစံ၌သစ်မူးယစ်ဆေး (FTND) Fight မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအားထုတ်မှုပုံဖော်။ ကျနော်တို့သုတေသီများ, ကုသနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ဆက်စပ်သို့မဟုတ် FTND ထောက်ခံအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်အခွင့်အလမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။
1 ။ ကျောင်း။ FTND မနှင့်ပေးအစားထိုးသို့မဟုတ်ကျောင်းများတွင်လိင်ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။ ကျောင်းများဖြင့်ယူဆောင်သည်အခြားဧည့်သည်စပီကဲ့သို့ပင် FTND တင်ပြချက်များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကျန်းမာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးအတန်း၏အရေးကြီးသောအလုပ်၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ ညစ်ညမ်းအကြောင်းကို utah ပြည်နယ် resolution ကို အဖြေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အများပြည်သူပညာရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်အလေးပေးဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ, peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာအတွက် grounded ခံရအပြင် အမျိုးမျိုးသော FTND ကျောင်းနှင့်ရပ်ရွာလူထုတင်ပြချက်များ၏အကြောင်းအရာ မှန်မှန်, ပြန်လည်သုံးသပ် updated နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပရိတ်သတ်များအတွက်အသက်အရွယ်-သည်သင့်လျော်သည်ကိုသေချာစေရန်ကုသနှင့်သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုရောက်လာပါတယ်။
အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်ကျော်နှင့်နိုင်ငံတကာတွင်ပေးထား + ပု 500 အများစုဟာတင်ပြချက်များအားလုံးသင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်စီစဉ်ခြင်းနှင့်လုံခြုံတဲ့သူကျောင်းကအရာရှိများ, လူထုခေါင်းဆောင်များသို့မဟုတ်မိဘများ၏တောင်းဆိုချက်အရမှာခဲ့ကြပြီ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ခရိုင်နှင့်ကျောင်းပေါ်လစီများကိုအောက်ပါဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်ုပ်တို့မဆိုကြင်နာတဲ့ပညတ်တော်အတိုင်းသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ဆန့်ကျင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ဟုယုံကြည်လျှင်တင်ဆက်မှုပေးဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ Utah ခုနှစ်, FTND ကိုလည်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးအသင်းဘုတ်အဖွဲ့က, Utah PTA နှင့်ကျောင်းအုပ်ကြီး, တိုင်ပင်မှူးမတ်များနှင့်ဒြေ-သူကိုနောက်ပိုင်းတွင်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူရလဒ်နှင့် ပတ်သက်. အများစုအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ပေးရာပေါင်းများစွာကနေခွင့်ပြုချက်နှင့်ထောက်ခံမှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
2 ။ သိပ္ပံ။ တစ်ခုတည်း neuroscience လေ့လာမှုပြနေစဉ်, စာရေးသူဖော်ပြလျစ်လျူရှု 25 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ နှင့် စာပေဒ 10 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းအလားအလာအတည်ပြုအားလုံး Institute မှ-ရာ၏ထိုကဲ့သို့သောကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်, ယေးလ်တက္ကသိုလ်, နှင့်မက်စ် Planck အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်။ သူတို့ကလည်းဖော်ပြထားခြင်းပျက်ကွက်4ဝေဖန်မှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ အဆိုပါ 2013 သူတို့ရဲ့အဓိကငြင်းခုံကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုလေ့လာမှုအဖြစ်၏ 15 လေ့လာမှုများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်တစ်ကျယ်ပြန့်-range ကိုမှညစ်ညမ်းချိတ်ဆက် 30 လေ့လာမှုများ လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။
အများအပြားကရောဂါရှာဖွေတဲ့ကုဒ် အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဖော်ပြရန်ဖို့ ICD-10 (US မှာမူလတန်းအဖြေရှာတဲ့အရင်းအမြစ်) တွင်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ 1980 ကတည်းက DSM အတွက်တည်ရှိပါပွီ။ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ neurobiology အပေါ်အခန်းကြီးလည်းယခု updated အတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောနေကြတယ် Psychiatry ဖတ်စာအုပ်များ အားဖြင့်၎င်း, ဆေးသမားအဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထား။
ဤအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အချက်အလက်အားလုံးသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” တစ်ခုတည်းကိုသာထင်ဟပ်စေသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသဘောထားများ၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သလား။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကြားခဲ့ရသောမတူညီသောနိုင်ငံများ၊ ဘာသာတရားများနှင့်နောက်ခံအမျိုးမျိုးမှရာထောင်ချီသောအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့်လူငယ်များကိုစာရေးသူမှဤမေးခွန်းကိုမေးကောင်းမေးကောင်းမေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသည်။
ပြဇာတ်မှာမူလတန်းအချက်အဖြစ်ဘာသာရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှထွက် single ဖို့လည်းတူသောအုပ်စုများအတွက်ညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေလူငယ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏လျစ်လျူရှုမယ်လို့ NoFap, Non-ဘာသာရေးများမှာအများစုအဘယ်သူကို၏.
3 ။ Mission ။ အစကတည်းကမှ, FTND တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအဖွဲ့သည်နိုင်ငံရေးလှိုင်း spanning နှင့်မျိုးစုံဘာသာတရားပါဝင်သော (နှင့်သစ္စာမရှိသော) အလုပ်သမားတစ်ဦးလောကအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ FTND ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် Mormonism များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုတစ်နည်းနည်းနဲ့က "LDS အဖွဲ့အစည်းက" ကိုအကြံပြုဖို့မသငျ့လျြောဘာသာရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ရသည်ခြင်းဖြင့်အများပြည်သူသံသယပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ disingenuous (နှင့်တိ) ကြိုးစားမှုဖြစ်ပုံရသည်။
FTND ညစ်ညမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမျှသာ "ဘာသာရေးစိုးရိမ်ပူပန်" ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုအများပြည်သူဆွေးနွေးမှုတစ်ဦးတည်းက၎င်း၏သိပ္ပံနည်းကျနှင့်အများပြည်သူကျန်းမာရေးတန်ရာအပေါ်ရာအရပျကိုယူလျှင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုစူးစမ်းဖို့သောအယူအဆစိန်ခေါ်ဖို့တိကျစွာတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ယနေ့အထိ, လုနီးပါးတိုင်းလူဦးရေအချိုးအစား spanning လူများစကားလက်ဆုံ-အနှံ့နီးပါးတိုင်းတိုင်းပြည်နှင့်တိုက်ကြီးပူးပေါင်းပါပွီ။ ဤအရေးကြီးသောမေးခွန်းများနှင့်သဘောထားကွဲလွဲမတည်မနေပါဘူးလို့ပြောသည်မဟုတ်။
ရဲ့သူတို့ကို-မပါဘဲလည်းရှိကွောငျးသိသာဘုံမြေပြင်မေ့အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ဥပမာ, မကြာသေးမီအမျိုးသားရေးရွေးကောက်ပွဲအမေရိကန်လူကြီးများညစ်ညမ်းမှအသက်မပြည့်သေး access ကိုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာကျယ်ပြန့်အများစု (90%) နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ် facing စတုတ္ထအကြီးမားဆုံးပြဿနာအဖြစ်အင်တာနက်လုံခြုံမှုကိုမြင်သောဖော်ပြသည်။
ဂယ်ရီ Wilson ကဖန်တီးသူဒါရိုက်တာ YourBrainOnPorn.com နှင့်များ၏ရေးသားသူက "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ။ "
Jill Manning သည် Ph.D သည်လိုင်စင်ရထားသောအိမ်ထောင်နှင့်မိသားစုကုထုံး၊ သုတေသနနှင့်စာရေးသူဖြစ်ပြီးကော်လိုရာဒိုတွင်အခြေစိုက်သည်။ သူသည်လက်ရှိတွင်လုံလောက်သောဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေပြီး၊ ကလေးများနှင့်မိသားစုများအတွက်အင်တာနက်ကိုပိုမိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Candice Christiansen, CMHC, CSAT-S က, ကုသမှုများအတွက် namaste ရေးစင်တာနှင့် The ကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံကိန်း၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ™သူမသည်တစ်ဦးသုတေသီစာရေးဆရာနှင့် Non-အဆက်အသွယ်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အထူးပြုမှုခင်းဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းမျိုး။
Donald Hilton, MD သည် San Antonio ရှိတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာတွင်အာရုံကြောခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာတွဲဖက်ပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်အာရုံကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာဝန်များအသင်းမှလည်းဖြစ်သည်။